ကင်းဘရစ်အတွက်အကောင်းဆုံးပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်: အပိုင်းတစ် - ကင်းဘရစ် - သတင်း
(ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်သစ်သီးများ၊ သစ်သီးများနှင့်အရသာရှိသည့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကသာမန်ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်နို့လက်ဖက်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်လာမည့်အပတ်တွင်ဖြစ်မည်!)
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ဘဝရွေးချယ်မှုများကိုဘယ်တော့မှမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကွာဟချက်နှစ်အတွင်းပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုမူကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောစရိုက်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးသင်သည်ကောင်းမွန်သောပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့အရသာရှိသင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိကြောင်းစိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာတွေအများကြီးကောင်းကောင်းကောင်းတယ်။ သူတို့ပဲအတော်လေးကကြဘူး။
လက်ဖက်ရည်ပူဖောင်းဆိုတာဘာလဲမသိသောသင်တို့အတွက်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်မှာယူမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သငျသညျဂိမ်းရှေ့ဆက်လျှင်, ထို့နောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ချက်ချင်း skip ဖို့အခမဲ့ခံစားရ!
၁။ သင်၏လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ များသောအားဖြင့်စံပယ် (လက်ဖက်စိမ်း) သို့မဟုတ်အာသံ (လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင်) များဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုခိုင်ခံ့ကျော်ချိုမြိန်ချင်လျှင်, ငါစံပယ်အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၂။ သင်၏အရသာကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏လက်ဖက်ရည်နှင့်ရောသောရည် (သို့မဟုတ်အစဉ်အလာအားဖြင့်နို့ / ခရင်မ်) ဖြစ်လိမ့်မည်။
၃။ သင်၏ထိပ်ဖျားများကိုရွေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် tapoca (ချိုသောအမည်းရောင်ပူဖောင်းကို casava အမြစ်ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့်)၊ boba (သစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်ပြည့်နေသောပင်လယ်ရေမှော်ပူဖောင်း) နှင့်ဂျယ်လီ (၎င်းသည်အုန်းသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း) အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ) ။ သင်မဝယ်မီစတိုးဆိုင်နှင့်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရပါမည်။ သို့သော်အသီးပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်သည်အမြဲတမ်းသက်သတ်လွတ်စားသည်။
4. အကယ်၍ နေရာသည်ဖန်စီလျှင်သင်၏ရေခဲ / သကြားပမာဏကိုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် - သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ရေပူနှင့်အအေးသောက်ခြင်းအကြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
၅ ။ သင်၏အရသာရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ပြည့်နေပြီ။
(မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများအားလုံးသည် 'takeaway' စျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပါးနပ်စွာထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ခဲ့သည်)
6) ခ Tap Baron, စိန့် Andrews က '' လမ်း
စျေးနှုန်း: ပေါင် ၃.၄၀ ပုံမှန်သောက်သုံးနိုင်သောလက်ဖက်ခြောက်အတွက် tapokaoca (ကျောင်းသားလျှော့စျေးအပါအ ၀ င်)
လက်ဖက်ရည် - ၃/၁၀
ဤသည်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည် ... မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ရိုးသားဖို့။ မီနူးသည်အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ နားလည်နိုင်သောအချက်မှာ၎င်းသည်နည်းပညာအရပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်မဟုတ်သောကြောင့်ပူဖောင်းလက်ဖက်ခြောက်ကျွေးမွေးရန်ဖြစ်သည့်နံနက်စာ - မနက်လည်စာကဖီးမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ရရှိနိုင်တဲ့ပူဖောင်းလက်ဖက်ခြောက်အားလုံးသည်သစ်သီးအရသာရှိတဲ့နို့လက်ဖက်ရည်တွေပါ။ တနည်းကား, နားလည်, ငါမဟုတ်ဘူး သော ဇီဇာကြောင် ဒါပေမယ့်ငါငိုပြီးတစ်ခေါက်သွားတယ်။ ခထပ်ခါထပ်ခါမသွားဘူးလို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အချိုရည်သည်အအေးခန်းမဟုတ်ဘဲအအေးအစားဖြစ်ပြီးနို့နှင့်စံပယ်လက်ဖက်ရည်ကိုမြည်းစမ်းသည်။
ယုတ်သောမိန်းကလေးများထဲတွင် Lindsay Lohan သည်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
အရောင်အားဖြင့်အရူးလုပ်မထားပါနဲ့ ... သရက်သီးလူသွားကြောင်း (စိတ်မကောင်းပါဘူး) ။
tinder အပေါ် hi လို့ပြောဖို့နည်းလမ်းတွေ
အဆိုပါ tapioka သည်အလွန်ခက်ခဲခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်) ဖြစ်နိုင်သည်မှာရှည်လျားလွန်းလှသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ငါက tapocaoca အဟောင်းနဲ့အခန်းအပူချိန်ရှိတဲ့နို့ကိုချပစ်လိုက်တယ်။ ကဗျာ။ တစ်ခုတည်းသောသနားခြင်းကရုဏာက (tap ပုံဆောင်ပုလဲ ၅ လုံးလောက်) အဲဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာ (ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း) အဲဒီမှာရှိနေတာကြောင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာဟာမကြာခင်ကုန်ဆုံးသွားတယ်။
ကောင်းကျိုးအချို့ - ငါ့ကိုအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကအရမ်းခင်မင်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့မှာအဓိကလမ်းတွေထဲကတစ်ခုထက်ပိုသောတိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းကြားမှာငါတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအပြင်ဘက်ထိုင်ခုံhadရိယာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အဓိကအိမ်ခြံမြေဖြစ်သည်။ သငျသညျရုံထိုင်ခုံအဘို့အသွားချင်လျှင်မူကား, ငါ waffle သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရရှိရန်အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၅) Mamasun, Burleigh St
Tapoca နှင့်အတူပုံမှန်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်အတွက်ပေါင် ၂.၉၅
လက်ဖက်ရည် - ၅/၁၀
ငါဒီနေရာကိုစကားစုတစ်စုနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် ... မျှတနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း (အများဆုံးစျေးအသက်သာဆုံး) ရှိခဲ့ပေမယ့်အရာအားလုံးဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်ပဲ။
အသီးအရသာသည်အလွန်အတုဖြစ်ပြီးစတော်ဘယ်ရီ sherbet ကဲ့သို့မြည်းစမ်းသည် - အမှန်တကယ်အတော်လေးကောင်းတဲ့၊ ဒါပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဖျားနာခဲ့ဖူးတယ် အဆိုပါ tapioca B. Tap Baron ရဲ့အားထုတ်မှုကဲ့သို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲထင်ရှားစွာ un-chewy ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုင်ခုံတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်လိုပဲပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်လေးနည်းနည်းပါးပါးနဲ့နေရာယူရတာနည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဘူး။
စျေးနှုန်း: ပေါင် (၃.၇၅) ပေါကျလျှင် tapocaoka ပူဖောင်းနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးသည်
လက်ဖက်ရည် - ၆/၁၀
ဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးထဲထဲဝင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလက်ဖက်ခြောက်ကိုယ်နှိုက်ကကျဆင်းသွားသည်။ ပို။ ပင်ပို။ ပင်ဒါငါကအခြား, ပိုကောင်းတဲ့ - အရသာပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ထက်ပိုမိုစျေးကြီးခဲ့ကြောင်းသတိရသောအခါ။
အဆိုပါ tapioka သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ထားခဲ့သော်လည်းလက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့စတိုးဆိုင်က၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအလေးအနက်ထားခဲ့သည် လမ်း အရမ်းချိုလွန်းသည် - (ပုံမှန်အားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအရာ) ဖြစ်သော creamy texture နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်အနည်းငယ်ထက်မကသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောက်ရိုးတစ်လျှောက်တွင်ပြင်းထန်စွာသကြားဓာတ်သရက်သီးနို့ကိုစုပ်ယူသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ B. Tap နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်နို့နှင့်အသီးအချိုး၏ဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါကသင့်ရဲ့ Vibe ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်လည်ပတ်ကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်မရဲ့ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်မဟုတ်ဘူး။
3) Marui, Regent စိန့်
စျေးနှုန်း: ပေါင် (၃.၄၅) ပေါကျကှဲ tapoca နှင့်အတူလက်ဖက်ရည်ပူတစ်လက်အတွက်
လက်ဖက်ရည် - 7/10
ယခင်က Ooshi Bubble Tea World ဟုလူသိများသော Marui သည်၎င်းတို့ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလိုက်သည်ကိုသဲသဲကွဲကွဲမသိရှိပါ။ ထိုင်ခုံများသည်အတော်အတန်အခြေခံကျသော်လည်းအဆင်ပြေသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည် - သူတို့ကရေခဲမုန့်ရောင်းသည့်ဘူတာရုံအနည်းငယ်ရှိခြင်းအတွက်ဆုကြေးရမှတ်များရခဲ့သည်။
သငျသညျဝက်နှင့်တစ်ဝက်သွားအပိုကုန်ကျစရိတ် (အခြားဆုကြေးငွေ) အဘို့အသွားတစ်ဝက်သွားနိုင်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ငါတဝက် tapoca နှင့်တစ်ဝက် aloe vera အဘို့အသွား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုချစ်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆောင်းပါးအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသမာဓိသုညပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ထိန်းချုပ်မှု variable ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့?)
လက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့ချိုသာသော tapoca သည်အရသာရှိလှသော်လည်း aloe vera သည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်သောက်စရာနှစ်ခွက်ပြီးသောအခါလွှင့်ပစ်လိုက်ရသည်။ ကျန်တဲ့ကျန်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုအနာဂါတ်အနာဂတ်အတွက်ငါကြည့်နေလိမ့်မယ်။
2) Chatime, Regent စိန့်
tapokaoca နှင့်ပုံမှန်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်အတွက်ပေါင် ၄.၂၅
လက်ဖက်ရည် - ၉/၁၀ Tapioca: 9/10 ထိုင်ခုံ - ၈/၁၀ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - ၈/၁၀
အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့် Chatime သည်ဗြိတိန်ရှိအဓိကပူဖောင်းလက်ဖက်ခြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါရောက်ဖူးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလက်ဖက်ရည်နဲ့ tapocaoka ဟာရေခဲနဲ့သကြားဓာတ်အဆင့်ကိုထောက်ကူပေးတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအရသာတစ်စုံကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်တယ်။ ဒါဟာ ဟုတ်တယ် သင်ကိုယ်တိုင်ကုသလိုလျှင်ဈေးပေါသောစျေးနှုန်းသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပေသည်။ သင်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်အတိုင်းမျိုးကွဲသည်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
ထိုင်ခုံများသည်အဆင်ပြေသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ (သင်ကြည့်ရှုသူနည်းနည်းလောက်လုပ်လိုလျှင်) ရွေးချယ်စရာများနှင့်နောက်ကျောပတ်လည်တွင်ရှိသည် (သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုမိုသီးသန့်တွေ့ဆုံလိုပါက) ။ မကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကျောင်းသားချေးငွေခွင့်ပြုသည့်ပမာဏထက်အနည်းငယ်မျှသောစျေးနှုန်းသာရှိသည်။
၁) Ji Chicken ဆိုင်၊ Regent St
စျေးနှုန်း: ပေါင် ၃.၅၀ ပုံမှန်သောက်သုံးနိုင်သောလက်ဖက်ခြောက်အတွက် tapokaoca
လက်ဖက်ရည် - ၁၀/၁၀
ငါချက်ချင်းဤအရပ်ဌာနကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ လက်ဖက်ရည်ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြင်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသစ်သီးတွေလည်းပါ ၀ င်ပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စူပါလတ်ဆတ်ပြီးcheုံပီသတတ်သည်။ ခွက် ဟုတ်တယ် အချို့သောအရာများထက်သေးငယ်သော်လည်းစျေးနှုန်းမှာအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပေါင် ၂ ပေါင်သာအစားအစာတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်သည်နေ့လည်စာစားချိန်တွင်လည်ပတ်ခဲ့သည်ကိုချက်ချင်းစဉ်းစားမိသောကြောင့်ကျဆင်းသွားသည်။
သငျသညျပူဖောင်းလက်ဖက်ရည် fix ကိုလိုအပ်နေလျှင်ငါ 100% ဂျီအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သိသမျှအကောင်းဆုံးအချက်အနေနှင့်၎င်းသည်အစားအစာနှင့်အချိုပွဲများကိုဆောင်ရွက်ပေးသည့် Chatime ထက်များစွာသေးငယ်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောကွင်းဆက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ရှေ့တန်းများနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသာလွန်ခဲ့သည်။ အ ၀ ါရောင်နှင့်ပန်းရောင်အရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်ဆုကြေးရမှတ်များအပြင်နံရံရှိ Moomin ၏ပန်းချီကားများ - အတွင်းပိုင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒါဟာ (သင်ကြောင်းသို့ရောက်လျှင်) အလွန် instagrammable ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂုဏ်အသရေဖော်ပြချက်: Granny Ma ရဲ့, Market ကရင်ပြင်
ဂရမ် Ma ရဲ့တနင်္ဂနွေ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သာဖွင့်လှစ်သည်, ငါသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ဝမ်းနည်းစရာမှာသူတို့မရရှိနိုင်မည်သည့်အသီးလက်ဖက်ရည်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီနေရာ ဟုတ်တယ် သို့သော်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးလာမည့်ဤဆောင်းပါး၏ဒုတိယအပိုင်းတွင်ဖော်ပြပါမည်။ ဖောင်းပွခြင်း!